Luxury Tours Hindiya - Dalxiisayaasha Dalxiiska Bhubaneswar - 91-993.702.7574
Laga soo bilaabo 1993, Sandbawlsiyada Turka N Safarku marwalba way fiicnayd wakaaladda socdaalka ee Odisha si ay u bixiyaan oo dhammaystiran safar raaxo ah India waayo-aragnimo.
Baro oo la kulmaan bixinnada ugu adag ee lagama maarmaanka ah ee dalxiiska dhismaha.
Dalalka ugu yar ee sahlan, sahan ee waqooyi-bari waa wax aan la ogeyn oo ah meel qarsoodi ah oo soo booqda iyo janno aan la ogaan!
Kudarsii Hindiya leh goobaha cirifka iyo muuqaalka ee muuqaalka, cawska, beeraha shaaha iyo waxyaabo kaloo badan.
Raadi oo ku soo dhawow meelo xiiso leh adduunka oo dhan iyada oo la wadaagayo khariidado caalami ah.
Sanduuqa cagaaran waa mid ka mid ah hay'adaha safarka ugu fiican ee Odisha. Waxaan runtii ku helnay safar cajiib ah iyaga oo u mahadceliyay.
Waxay ahayd waayo-aragnimo xusuus leh Sandbirdle Tour Tour N Travels. Aad ugala tali iyaga!
Mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee aad ku yeelan karto Sandbirds Tour Tour Travel, hay'adda safarka ugu fiican ee Odisha.
Noloshu waa safar. Waxaan aaminsanahay in safarka uu dadka u bedeli karo siyaabaha aan la fileynin. Ka fariisto daqiiqad ka soo wareegto maalintaada si aad u daawato fiidiyowgaan oo aad u maleyso inaad ku sugan tahay Odisha.
Ku noolaanshaha, baro, ogow oo aad la yaabtaan dhammaan quruxda la heli karo si aad u ogaato. Kaalay oo ku raaxee quruxda oo dhan leh Luxury Tours India khayraadka hodanka ah ee quruxda badan quruxda quruxda badan si aad u qurux badan, waayo-aragnimo hodan ah, waayo waxaan ka dhignaa safarkaaga mid farxiya.